Neruda haana kufa nekenza | Zvazvino Zvinyorwa
Neruda, Mudetembi weChile uye Mubayiro weNobel muMabhuku, haana kufa negomarara sekuratidzwa kwake negwaro rekufa Nyanzvi dzezve forensic dzanga dzichiongorora nyaya iyi ine gakava, dzakaronga svondo rapfuura iri muSantiago de Chile kuti izvo zvakakonzera kufa kwanyanduri zvaigona kunge zvaive zvimwe sekuratidzira kwavakaita mugwaro rakapihwa mutongi Mario Carroza, mavanofumura. mhedziso dzavo dzese. Uyu ndiye nhasi nhasi ari kumberi kwekuferefeta parufu rwemunyori, uyo akafa panguva yeudzvanyiriri hwaAugusto Pinochet.
Sezvinoratidzwa napurofesa weSpain Aurelio Luna, anova chikamu chekutsvaga uku: «Zvidzidzo zvine chekuita nehuremu hwemuviri index nekushandisa hupamhi bhandi rako zvinotibvumidza kusabvisa zana muzana kuvapo kwe cachexia«. Luna akatsanangura kuti chikonzero chekufa kwemunyori hachisi «cachexia«, (Kuchinja kwakadzama kweiyo muviri kunoonekwa nekushomeka, kushomeka kwehunhu uye kushaya simba kukuru), sezvakaratidzwa mushumo.
Asi izvi hazvisi izvo chete zvakawanikwa mukutsvaga kwakadai asi chinhu chakawanikwa zvakare chingave chiri murabhoritari yakakura mabhakitiriya. Uku kutsva kwekutsvaga kuri kuongororwa uye kuongororwa uye mhedzisiro yacho ichazivikanwa mukati memwedzi mitanhatu kusvika pagore rimwe. "Nemhedzisiro yatinayo izvozvi, hatigone kubvisa kana kusimbisa hunhu, hwesango kana hwemhirizhonga, hwekufa kwaPablo Neruda", akawedzera Muzvinafundo Aurelio Luna.
Sezvo iwe zvaunenge uchitoziva kuti ndiani akatevera hupenyu nebasa reChilean munyori, Pablo Neruda panguva iyoyo, aive chikamu che Central Committee yeCommunist Party uye akafa masvondo maviri chete mushure mekupidigura kwakakunda mutungamiri wezvematongerwo enyika Salvador Allende. Kune rimwe divi, pane iyo vhezheni yakapihwa nemutyairi wenhetembo, Manuel Araya, uyo agara achivimbisa kuti Neruda akaurawa nejekiseni inouraya yakarairwa nevamiriri vehurumende.
Sezvinowanzo taurwa mune izvi zviitiko, chokwadi chinenge chinogara chichiuya pachena,… Tinovimba kuti nyaya iyi ichaona chiedza munguva pfupi uye ruramisiro inogona kuzoitwa pakupedzisira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Noticias » Neruda haana kufa nekenza
Jose Stenio Ferreira Luz akadaro
Ndanga ndiri akauraiwa zvakanyanya neropa rake.
Pindura José Stenio Ferreira Luz